Carbon | October 2021
Isi > Carbon
ike carbon eriri okpukpu
Nwere ike okpukpu carbon - ihe ngwọta na-eme ihe
Kedụ ka ị ga - esi mara ma agbawara carbon? Lelee anya maka ọkọ, karịsịa ihe dị omimi ma ọ bụ site na agba. Jiri mkpụrụ ego dollar, pịa mpaghara ọ bụla a na-enyo enyo ma gee ntị maka mgbanwe ụda. Tapda ụda nkịtị ga-abụ ihe nzuzu mgbe carbon mebiri. Jiri nwayọ kwanye mpaghara a na-enyo enyo iji chee ma ọ dị nro karịa mpaghara gbara ya gburugburu.
carbon bike na ịzu
Carbon igwe kwụ otu ebe na onye ọzụzụ - ajụjụ nkịtị
Ọ dị mma itinye igwe ịnyịnya carbon na onye na-enye ọzụzụ? Dabere n'ụdị onye na-enye ọzụzụ na ojiji, ọ nwere ike itinye ike dị iche na igwe gị, tinye akụkụ na / ma ọ bụ mebie ma ọ bụ mebie igwe gị, gụọ mgbakwunye na ntuziaka onye nwe ụlọ pụrụ iche maka ndị na-enye ọzụzụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ carbon fiber na-agbakwunye na onye na-enye ọzụzụ.
rotor carbon q yiri mgbaaka
Rotor carbon q yiri mgbaaka - ihe ngwọta na-
Ihe mgbanaka Rotor Q na-arụ ọrụ? Q-Rings ga-arụ ọrụ maka ọtụtụ mmadụ, mana, enwere ọtụtụ ndị m ga-agafe ma emechaa. Maka ndị na-amaghị ihe ROTOR Q-Ring bụ, ọ bụ ihe nkedo elliptical nke na-enyere aka ịbawanye arụmọrụ gị site na ngbanwe ụgbọ oloko dịgasị iche n'oge ị na-aga.
lightest carbon handlebars
Ogwe aka carbon dị mfe - ịza ajụjụ ndị a
Ogwe aka carbon ka mma? Kama inwe mmetụta ọ bụla, njikwa aka carbon nwere ike inye aka ịmịkọrọ mmiri na nkata ahụ. Mgbe ị na-aga njem ogologo, nke ahụ nwere ike ime ka ọdịiche dị na nkasi obi karịa maka aka gị.
calfee carbon idozi
Calfee carbon rụkwaa - ngwọta kwere omume
Ego ole ka ọ na-eri iji rụkwaa igbe ikuku carbon? Obere obere (1/3 nke dayameta ma ọ bụ obere) bụ $ 200. Mgbaji nke etiti (mgbaji agbaji karịa 1/3 nke ọkpọkọ ọkpọkọ) bụ $ 300. $ 400 ga-edozi nnukwu mmebi (carbon na-efu efu, mmebi karịrị 6 sentimita asatọ na ọkpọkọ ahụ. Okpokolo VeloNews.com nwere ike ịdaba na $ 300.
carbon nzukọ mado
Mbadamba mkpokọta carbon - olee otu anyị ga-esi edozi
Gịnị bụ carbon nzukọ mado?
kinesis carbon ndụdụ
Kinesis carbon fork - azịza bara uru
Carb ndụdụ ọ bara uru? Azịza dị mfe: Nzaghachi ndị ọzọ ziri ezi: ikuku ndụdụ dị ntakịrị (obere) ma nwee ntakịrị mgbaghara. Mana uru kachasị mkpa bụ na o nwekwara nkuku dị mma karịa aluminom (ọ dịkwa mma karịa nchara ma ọ bụ titanium nke mere ọtụtụ igwe na igwe igwe Ti na-ejizi ndụdụ carbon) abịa ugbu a.
Udiri ihe omuma nke carbon
Ule a na - enyocha ihe gbasara Carbon - otu esi edozi ya
Kedu ka m ga-esi gbakọọ akara ụkwụ carbon m? Site na ịkọwa ego ole ị na-ewepụta kwa izu ma mụbaa site na 52 ị nwere ike ịnweta mkpofu mkpofu kwa afọ. Nke a na - emezi ka ike carbon wee baa ụba iji nweta akara ukwu gị.
carbon gravel ndụdụ
Carbon gravel fork - esi edozi
Ebube carbon dị mma maka gravel? Agbanyeghi na m gbalịrị ike m ịchọta fọk gravel fọk nke ahaziri maka onye njem ahụ. kamakwa etinyekwara ụfọdụ ndụdụ carbon na-adịchaghị mma nke na-enweghị eyelets na-arị elu ma ka nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ịkwanye ngwongwo na ịgba ọsọ njem na kachasị nke ọma maka imi gravel izugbe.
carbon eriri eziokwu
Eziokwu Carbon fiber - ngwọta bara uru
Kedu ihe pụrụ iche maka eriri carbon? Carbon fiber bụ ihe dị ala nke nwere nnukwu ike ịdị elu. Nke a pụtara na eriri carbon siri ike na-enweghị ebibi dị ka nchara ma ọ bụ aluminom, na-eme ka ọ dị mma maka ngwa dịka ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ elu.
carbon igwe kwụ otu ebe
Carbon igwe kwụ otu ebe - ka esi ekpebi
Ndi okpokoro agba ahihia kwesiri ya? Maka ego anyị, mmetụta nke carbon dị elu karịa aluminom, ọ nwere ike, n'eziokwu, kwesịrị ị nweta nkwalite n'onwe ya. E nwere isi ihe abụọ anyị na-ahụ dị ka uru nke ikuku carbon karịa nke aluminom: ịjụ oyi na nkwonkwo torsional.
rụkwaa carbon bike etiti
Mezie carbon bike etiti - ịchọta ihe ngwọta
carbon vs aluminum njikwa
Carbon vs aluminum handlebars - ihe ngwọta na
Ngwongwo carbon na-eme ihe dị iche? Maka ndị na-ebido ebido, n’ebughị ibu ibu, ogwe osisi carbon nwere ike ịnye arụmọrụ na-egbochi mmiri karịa ọtụtụ ogwe osisi alloy. Kama inwe mmetụta ọ bụla, njikwa aka carbon nwere ike inye aka ịmịkọrọ mmiri na nkata. Mgbe ị na-aga njem ogologo, nke ahụ nwere ike ime ka ọdịiche dị na nkasi obi karịa maka aka gị.